Luis Enrique oo soo dhaweeyey Magacaabista xulka qaranka Spain | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Luis Enrique oo soo dhaweeyey Magacaabista xulka qaranka Spain
Published on July 10, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(11-7-2018) Macalinkii hore ee kooxda Barcelona oo shaqo la aan ahaa tan iyo sanadkii 2017 ayaa goor dhow loo magacaabay xilka macalimo ee xulka Spain isagoo badali doona Fernando Heirro oo dhawaan is casilay.
Kabtankii hore ee kooxda Real Madrid Fernando Hierro oo 50 jira ayaa iska casilay shaqada macalinimo ee xulka Spain kadib wejigabixii uu xulkaasi kala kulmay koobka dunida oo ay kusoo hareen wareegiisa 16-ka.
Xiriirka kubadda cagta ee dalka Spain oo kal hore shaqada ka eryay tababare Julen Lopetegui ayaa hada xaqiijiyey in Luis Enrique uu hogaamin doono xulka La Roja Spain.
Macalin Luis Enrique oo 48 jira ayaa saxiixay qandaraas laba sano ah wuxuun tartanka xilkan kaga guuleystay dhowr macalin oo ay kamid yihiin, Michel Conzales , Zinedine Zidane,Roberto Martinez, Xavi Hernandez Rafael Benitez , Arsène Wenger, Vicente del Bosque José María Hernández, known as Guti, iyo Laurent Blanc.
Enrique oo 9 koob kula guuleystay kooxda Barca ayaa hada laga rabaa inuu dib usoo celiyo awoodii ciyaareed ee xulka Spain oo sandkan weji gabax kala laabtay dalka Russia maadaama ay ku hareen wareega 16-ka ee koobkan.
Luis Enrique ayaa si taxadar leh u soo dhaweeyey Magacaabistiisa xulka dalka Spain isaga oo sheegay in uu ku dadaali doono sidii uu meel fiican u gaarsiin lahaa xulka kubada Cagta dalkiisa oo Sanadihii danbe iska liitey.